Gudoomiyaha Golaha Guurtida oo dalka ka maqnaa ayaa dib u soo laabtay si uu u gudagalo mudo kordhinta loo samaynayo xukuumada | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Gudoomiyaha Golaha Guurtida oo dalka ka maqnaa ayaa dib u soo laabtay si uu u gudagalo mudo kordhinta loo samaynayo xukuumada
Gudoomiyaha Golaha guurtida Saleebaan Gaal ayaa manta dalka dib uGu soo laabtay isagoo hawlo caafimaad uGu maqnaa dalka UK. Gudoomiyaha ayaa la sugeyey tan iyo markii gudida komishinka dooroshooyinku ku dhawaaqeen inay doorashadii mudo sanad ah ay dib u dhigeen iyagoo u mudeeyay inay dhacdo bisha June 1deeda 2016.
Madaxweynaha ayaa sabtidii u gudbiyey warqadii komishanka uga timid ee ay ku cayimeen xiliga ay doorashadu dhacayso isagoo faray golaha guurtida inay ka gutaan waajibkooda dastuuriga ah oo ah inay xukuumadan u sameeyan mudo kordhin. Xukuumada ayaa la sheegayaa inay beryahanba olole uGu jirtay sidii ay golaha guurtida uGu qancin lahayd inay u kordhiso mudo laba sano ah oo aanay raacin mudo kordhinta ay sameeyeen komishanku uu ah hal sano. Deeq bixiyayaasha gaar ahaan dowlada ingiriiska ayaa iyadu si cad uga qaylisay in la kordhiyo mudo kordhin 6 bilood ka badan, iyagoo ku hanbjabay inay ka fiirsandoonaan dhaqaalaha ay siiyaan Somaliland hadii la iska kordhisto wakhtiga oo doorashada laga warwareego.
Waxa la dhawraaba waa maamlmahan soo socoda mar hadii loo yeedhay Saleebaan Gaal oo uu dalka ku soo laabtay, waxaanu sheegay in aanu hada odhan kirin mudadaas baanu kordhinaynaa laakiin mar hadii gudidii dooroshooyinka yiraahdeen doorasho ma qaban karno waa qasab inaanu mudo kordhin samaynaa.
Hadii golaha guurtidu kordhiyo mudo ka badan xiliga ay komishanka dooroshooyinku qabteen waxa dhici karta in nagadgelyo daro iyo iska hor imaad baladhani dhex maridoono xukuumada iyo shacbiga